Deni ayaa qiray in siyaasadda Somalia ay tahay mid aad u adag, qofka ka shaqaynayana ay ku… – Hagaag.com
Deni ayaa qiray in siyaasadda Somalia ay tahay mid aad u adag, qofka ka shaqaynayana ay ku…
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa qiray in siyaasadda Somalia ay tahay mid aad u dhib badan, qofka ka shaqaynayana ay ku adag tahay.
Madaxweynaha oo wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyay Universaltv ayaa kaga hadlay xaaladda guud ee dalka, midda siyaasadda iyo caqabadaha ku horgudban hannaanka geedi-socodka ee doorashooyinka dalka.
“Runtii siyaasadda Somalia aad bay u adag tahay, waxaana keenaaya waa shaqo aanan nidaam ku socon, oo aad ka shaqaynaysid. Marka waan qirayaa inay siyaasadda Somalia adag tahay, qof kasta oo ka shaqaynayana ay ku adag tahay, maxaa yeelay adduunka kale siyaasaddu ama dowladnimada adduunka casriga la yaqaano waa hay’ado dowladeed oo dastuur leh.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Dalka Somalia burbur waxaa uga dhacay dastuurkii dowladda, dadkii waa jooggaa, dhulkiina waa jooggaa, laakiin shuruucdii iyo nidaamkii dowladnimadu mudduu maqnaa, oo dadka qaybtiisa iska iloobay, weliba jiil aad u fara-badan oo jiilalka hadda ah, oo aniga intooda badan iga yar-yar oo hadda aad u soo koraaya, oo runtii daruuf adag ku soo barbaaray, aqoon-darro badan baana jirta. Dadkii dowladnimada yaqaanay oo ka shaqayn jirayna wax dhintay iyo wax gaboobey noqdeen.”
Siciid Cabdullaahi Deni, Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa iftiimiyay inay soo dhammaanayaan khilaafaadyada wiiqay doorashada lagu wado in sanadkan dalka laga qabto.